Nabaddoon Siciid Cumar Xassan oo xalay dablay hubaysan ku dishay Bossaso oo saaka la aasay; hawl-gallo ammaan oo si wayn uga socda magaalada. – Radio Daljir
Nabaddoon Siciid Cumar Xassan oo xalay dablay hubaysan ku dishay Bossaso oo saaka la aasay; hawl-gallo ammaan oo si wayn uga socda magaalada.
Bossaso, April, 25- Allaha u naxariistee waxaa saaka lagu aasay magaalada Bossaso Nabadoon Siciid Cumar Xassan oo xalay (Axad) oo lagu dilay magaalada Bossaso, isagoo ka soo baxay masaajid ku yaalla xaafadda New Bossaso ee magaalada Bossaso.
Aaska marxuunka waxaa ka qaybgalay dad badan oo isugu jira odayaal dhaqan, culimo diineed iyo dadweyne kale oo ay wajiyadooda ka muuqatay dareen la xiiriira dilalka micna la?aanta ah ee lagu hayo dadka wax-galka ah ee reer Puntland gaar ahaa marxuurka xalay dhintay.
Nabadoonka ayaa la toogtay salaaddii cishe ka dib mar uu ka soo baxay masjidka Rashiid ee magaalada Bossaso, waxaana goobta dilku ka dhacay ku dhaawacmay labo qof oo kale.
Dilka nabadoonka waxaa gaystay rag aan la aqoonsan oo bastooladu ku hubaysan, waana oday dhaqameedkii afraad ee lagu dilo magaalada Bossaso muddo kooban, waxaana si taas la mid ah uu warjeefka oday dhaqameedku ka socday magaalada Galkacyo.
Dhinaca kalena, afhayeenka Isimmada Puntand Garaad Cabdullaahi Cali Ciid ayaa cambaareeyay dilka nabaddoon Kaashawiito, waxana uu shacabka Puntland ugu baaqay in ay la shaqeeyaan laamaha ammaanka si looga hortago khatarta ammaan ee soo foodsaartay dadka reer Puntland. Garaadku waxa uu geerida nabaddoon Kaashawiito uga tacsiyeeyay ehelkii qaraabadii iyo guud ahaan shacabka Puntland.
Alle ha u naxariistee Nabadoon Siciid Kaashawiito oo lagu dilay Bossaso.
Bossaso, Apr 24 – Waxaa galabta magribkii lagu dilay magaalada Bossaso Nabadoon Siciid Cumar Kaashawiito oo ka mid ahaa nabadoonada magaca leh ee reer Bossaso.
Alle ha u naxariistee Nabdoon Kaashawiito ayaa la dilay mar uu ka baxay masjid uu ku soo tukaday salaadda magrib.
Dalblay hubaysan ayaa marxuumka rasaas ku furay, waxaana uu marxuumku ku dhintay isla goobta dilku ka dhacay.
Galkacyo iyo Bossaso ayaa lagu dilay nabdoono, waana nabadoonkii 5-aad ee lagu dilay Puntland sannadkan 2011.